14 ม.ค. 2563 - 21:54 น.
မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း ၆၀၀ နီးပါးကို အမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့် ပေးအပ်ပြီး ပြန်လာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆို
အရင်က မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နိုင်ငံသား အဖြစ်ကစွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေအနက် အမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသူ တချို့ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း မြန်မာအစိုးရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြဲနေထိုင်ခွင့် ပီအာလျှောက်ထားသူ ၆၄၉ ယောက်ရှိတဲ့အထဲက ၅ နှစ်အတွင်းမှာ ၅၉၁ ယောက်ကို နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီက ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ ပီအာ လျှောက်ထားခွင့်ကို ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီကတည်းက စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း ခွင့်ပြုပေးလိုက်သူတွေထဲမှာ အမေရိကန် ပတ်စ်ပို့ကိုင်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေ အများစု ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အမေရိကန်က လျှောက်ထားသူတွေကို ပီအာပေးခဲ့တာ လူ ၁၄၀ ကျော်ရှိပြီး အဲဒီအထဲမှာ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေးနဲ့ ကွယ်လွန်သူ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် လားရှိုးသိန်းအောင်ခေါ် ဂျင်မီဂျက်တို့လည်း အပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းဇော်က ပြောပါတယ်။
ပီအာပေးခဲ့သူတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်ခဲ့သူ နိုင်ငံသားဟောင်းတွေက အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအများဆုံးက သူတို့နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအများဆုံးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်သူတချို့ကတော့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုအမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့် ပီအာရသွားသူတွေဟာ သူတို့ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်စရာ မလိုပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ဖို့လည်း ဗီဇာမလိုပဲ တနှစ်နေထိုင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်လို့ ဆိုထားပေမယ့် နှစ်စဥ်တော့ သက်တမ်းတိုးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးကြောင့် ပြည်ပကို ထွက်ပြီး နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်ပတိမ်းရှောင်နေထိုင်သူ Exile တွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ပြန်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့တွေကတော့ လက်ရှိခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ၂၀၁၅ ကတည်းက စတင်နေတယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းဇော်က ပြောပါတယ်။
ပြည်ပတိမ်းရှောင်နေထိုင်သူ Exile အဖြစ်ကနေ ပီအာ ခွင့်ပြုလိုက်သူတွေထဲမှာ အဝေးရောက် အမျိုးသားညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း၊ ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကြည်ဇော်မိုး ခေါ် ဦးအောင်ဇော်၊ DVB ရုပ်သံသတင်းထောက်ဦးနေဇော်နိုင်တို့လည်း ပါဝင်တယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းဇော်က ပြောပါတယ်။
လျှောက်ထားသူတွေအနက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်စပ်ကြောင်း သတင်းရရှိထားသူတွေကိုတော့ အမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့် မပေးဘဲ ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခဲ့သူ ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ဖော်မပြောဆိုပါဘူး။
လက်ရှိမှာ ပြည်ပတိမ်းရှောင်နေထိုင်သူ Exile အဖြစ်ကနေ ပြန်လည်လျှောက်ထားသူ ၃၉၇ ဦးရှိပြီး အဲ့ဒီထဲမှာ ၃၀၆ ဦးကို နိုင်ငံသားအဖြစ် ပြန်ခွင့်ပြုပေးထားတာကိုလည်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
လက်ရှိပီအာထပ်မံလျှောက်ထားသူတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း ၁၃ ဦး၊ ဆက်စပ်သူ ၄ ဦး၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူ ၁ ဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၂၅ ဦးရှိပြီး သူတို့ကို စိစစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စိစစ်မှုတွေကို ပြည်ထဲရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင် စတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေက တာဝန်ရှိသူတွေက အဆင့်ဆင့်စိစစ်ပြီးမှ လက်ခံတယ်လို့လည်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းဇော်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
လုပ်ငန်းကော်မတီဝင် လဝက အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ဥက္ကဌ ဗဟိုကော်မတီက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဥက္ကဌ ပဏမ လုပ်ငန်းကော်မတီက လူတွေ့ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံ
อัลบั้มภาพ ပြည်ပရောက်မြန်မာအများအပြားကို ပီအာပေးခဲ့တယ်လို့ဆို